Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo jawaab ka bixiyay hadalkii Xasan Sheekh (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo jawaab ka bixiyay hadalkii Xasan Sheekh (DHAGEYSO)
Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland C/xakiim Cumar Cameey ayaa si weyn u taageeray hadalkii kasoo yeeray wasiirka haweenka maamulkaas, kadi markii ay kasoo horjeesatay gargaar caafimaad uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u fidiyay gabadhii lagu kufsaday gobolka Mudug.
C/xakiim Cameey ayaa sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud looga baahan yahay inuu wax ka qabto gabdhaha lagu dhibaateeyo magaalada Muqdisho, halkaasi oo uu sheegay inay tahay meelaha ugu badan oo ay gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatooyinka ugu badan kala kulmaan.
Sidoo kale, wuxuu madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland C/xakiim Cameey sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud aanay waxba ka gelin, kana hadi karin arrimaha Puntland, balse ay arrintaasi u taalo Puntland.
Dhinaca kale, C/xakiim Cameey ayaa sheegay in gabdhaha Soomaaliyeed meel kasto oo ay joogaan ay yihiin kuwa isku xuquuq ah balse aan loo baahnayn in arrintaan la siyaasadeeyo.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland C/xakiim Cumar Camey ayaa imaanaya xilli dhawaan madaxweynaha Soomaaliya ee xilkiisa dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud uu shaaciyay inuu gargaar caafimaad u fidin doonno gabadhii dhawaan kufsiga loogu geystay degmada Galdogob ee gobolka Mudug.